Ny telefaona Huawei iray mitovy endrika amin'ny Nexus 6P dia mandalo ny TENAA | Androidsis
Misy finday avo lenta Huawei vaovao amin'ny fomban'ny Nexus 6P miseho amin'ny TENAA
Raha nisy zavatra nanaitra ny Nexus 6P, ankoatry ny maha a telefaona mahay mandanjalanja Amin'ny endriny sy ny antsipirihany dia teo an-damosiny ilay barany ambony nanjary mainty izay nametraka azy tamin'ny finday avo lenta izay tsy nitovy tamin'ireo nahazatra antsika. Tsy mahagaga raha mitady endrika vaovao na endrika ivelany ivelany izay manavaka ny telefaonin'izy ireo amin'ny hafa ny mpanamboatra, ka i Huawei dia miverina amin'ny alàlan'ny finday avo lenta vaovao.
Smartphone vaovao Huawei nohamarinin'ny TENAA. Na dia tsy voatanisa ao anaty lisitra aza ny sasany amin'ireo famaritana ny fitaovana dia manambara a famolavolana tena mitovy amin'ny Nexus 6P an'ny Google izay novokarin'i Huawei ary izay natomboka tamin'ny taon-dasa ho smartphone tsara amin'ny fomba sasany, indrindra amin'ny sariny. Ka niverina i Huawei mba hisintona an'io famolavolana io hanolotra izay mety ho Huawei Mate S2 vaovao.
Azo antoka fa tsy hitantsika ilay bara tampony amin'ny finday marobe, fa raha hafa no tadiavinao ho an'ny hafa, farafaharatsiny amin'ny famolavolana ny lamosiny, ity Huawei vaovao ity dia toa iray ho azy.
Ary na dia te hahalala ny sasany amin'ireo mampiavaka azy avy amin'ny TENAA aza izahay, dia fantatray fa miatrika izay ho Huawei Mate S2 izahay, noho izany, manana ny sasany amin'ireo famaritana azy izahay. Anisan'izany no ahitantsika Kirin 960 Kirin ary ny efijery izay hahatratra 5,9 santimetatra Full HD. Izy io koa dia manana RAM 4 GB, raha mitondra antsika hatramin'ny 64 GB ny fahatsiarovana anatiny. Mikasika ireo fakan-tsary dia hahatratra 16 na 12 MP eo aoriny ary solosaina 8 MP ho an'ny selfie eo aloha.
Finday izay ho tonga miaraka amin'ny Android 7.0 Nougat ary izany dia hambara amin'ny volana ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Misy finday avo lenta Huawei vaovao amin'ny fomban'ny Nexus 6P miseho amin'ny TENAA
LeEco Le 2S dia miseho amin'ny GFXBench; RAM 4GB sy puce Snapdragon 820
Xiaomi dia nanambara ny Mi Pay, serivisy fandoavam-bola amin'ny finday